Shirkaddii la siiyay Qandaraaska Kaadhadhka cusub ee codaynta oo Xogtii u qaadday Koonfur-Afrika | Somaliland.Org
Shirkaddii la siiyay Qandaraaska Kaadhadhka cusub ee codaynta oo Xogtii u qaadday Koonfur-Afrika
March 27, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Khubaro ka tirsan shirkad ajaanib ah oo qandaraas lagu siiyay daabacaada kaadhadhka cusub ee codbixiyeyaasha doorashada Somaliland, ayaa la sheegay inay xogta Diiwaangelinta u qaaday dalka Koonfur Afrika.
Inkastoo aanu jirin wax war ah oo rasmi ahaan ay arrintaa ka soosaareen Komishanka Doorashooyinka iyo Shirkaddu, haddana siday ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Wargeyska Ogaal, waxa muddooyinkii u dambeeyay dalka ku sugnaa khubaro ka tirsan shirkaddaas oo lagu magacaabo Face Technologies Limited.
Afhayeenka Komishanka Doorashooyinka Qaranka Maxamed Axmed Xirsi (Geelleh) oo 9 bishan aynu ku jiro ee March warbaahinta kula hadlay Hargeysa, waxa uu sheegay in Qaadhaanbixiyeyaasha caalamiga ahi ay kaadhadhka lagu bedelayo kuwii hore ee Diiwaangelinta qandaraas ku siiyeen shirkad lagu magacaabo Face Technologies oo laga leeyahay dalka Koonfur Afrika.
Hase yeeshee, waxa la sheegay in khubaro shirkaddaa ka tirsani ay xog ka soo baxday mishiinka Server-ka ee dib u kala hufaya liiska codbixiyeyaasha doorashada oo muddooyinkii u dambeeyay lagu hawlanaa ay doraad u qaadeen dhinaca dalka Koonfur Afrika, si ay u soo daabacaan. “Weli hawshaa Serverka wax aan imika kaa odhan karayaa ma jirto – iska yara suga, inyar yara suga,” sidaa waxa yidhi guddoomiyaha Komishanka Ciise Yuusuf Maxamed oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay waxa ka jira qaadista xogta diiwaangelinta iyo geedi-socodka hawsha Serverka.
Guddoomiyaha Komishanku waxa uu ka hadalka arrintaa isu dhaafiyay Afhayeenkooda, balse dhawr jeer oo aanu Afhayeenka la xidhiidhnay noomay suurtogelin in aanu helo, ka dib markii uu Telefoonkiisa gacanta qaban waayay.
Ma cadda sababta keentay in xogtaa la sheegay loo qaado dalka Koonfur Afrika, iyadoo aan weli Komishanku soo bandhigin natiijada ka soo baxday Server-ka dib u kala shaandhaynaya liiska codbixiyeyayaasha doorashooyinka Somaliland, kaasoo hawshiisa qandaraas lagu siiyay shirkad la yidhaahdo ERIS oo saldhigeedu yahay dalka Ingiriiska.
Sidoo kale, ma cadda inta ay le’eg tahay xogtaa la sheegay in dibadda loo qaaday.
Shirkadda Face Technologies ee qandaraaska lagu siiyay daabacaada kaadhadhka cusub oo laga leeyahay dalka Koonfur Afrika, waxa la aasaasay 1993-kii, waxayna ka shaqaysaa samaynta kaadhadhka aqoonsiyada, kuwa diiwaangelinta iyo doorashooyinka, kaadhadh lacagaha bangiyada iyo samaynta liisamada gaadiidka.
Sida ku cad xog ay shirkaddu gelisay barteeda Internet-ka, sannadkii tegay ee 2009 waxay ka soo shaqaysay dalalka Itoobiya, Malawi, Mozambique, Sri Lanka iyo Hindiya, kuwaasoo ay hawlo kala duwan ka fulisay.
Shirkaddu dalka Mozambique waxay u samaysay kaadhadhka diiwaangelinta codbixiyeyaasha, gaar ahaan nooca aqoonsiga wejiga iyo faraha, halka ay dalka Itoobiya u samaysay kaadhadhka diiwaangelinta nooca aqoonsiga farta (figure print).
Face Technologies limited, heshiiska qandaraaska lagu siiyay ee Somaliland waxa uu ku saabsan yahay daabacaada kaadhadhka cusub oo leh aqoonsiga farta iyo wejiga, taasoo ahayd qaabkii diiwaangelinta lagu galay. Hase yeeshee, shirkaddu boggeeda Internet-ka meelna kagamay xusin heshiiska iyo hawsha qandaraaska lagu siiyay ee ay kula jirto Somaliland.
Previous PostDonald Payne oo dhaliilo xad-gudub Bani’aadamnimo u jeediyay Xukuumadaha Somaliland iyo ItoobiyaNext PostTallaabooyinka Caddaalad-darrada Komishanka Doorashooyinka ee ku gedaaman	Blog